Global Voices teny Malagasy · 21 Marsa 2008
Tantara tamin'ny 21 Marsa 2008
Jordania21 Marsa 2008
Isiraely: Vehivavy Jiosy hoe i Shakespeare?
Tselatra · Angletera21 Marsa 2008
Efa nampisy adihevitra hatry ny ela ny momba an'i Bard (aza manontany akory fa na izaho mpandika teny aza tsy mahalala io anaran'olona io). Mety ho vehivavy Jiosy Italiana ve i Shakespeare (ity no antony nandikako ity lahatsoratra ity)? Porofo valo no atolotry Jhon Hudson ao amin'ity rohy Jewcy's ity...
Isiraely: Fitsidihana manantantaran'i Merkel
Tselatra · Alemaina21 Marsa 2008
Ny kabarin'i Angela Merkel teo anoloan'ny antenimiera Isiraeliana (Knesset) no voalohany indrindra nataona mpitondra fanjakana Alemana ambony hatramin'izay. Nikasa Ramatoa Merkel ny hikabary amin'ny teny alemana saingy nahatezitra ireo sisam-patin'ny fandripahana ny jiosy tamin'ny ady lehibe faharoa (shoah na Holocaust no ahalalana azy amin'ny teny vahiny) izany fikasana izany –...